Raha ampitahaina amin'ny piano nentim-paharazana, ny piano niomerika dia tsy manahirana firy, ny sisa ataonao dia ny miditra; hamonjy anao amin'ny fametahana piano. Ary ny maodely azo isa amin'ny piano nomerika dia azo entina amin'ny fotoana rehetra. Izany dia mety indrindra ho an'ny tanora tia piano, saingy mila mifindra matetika, na mifindra any amin'ny tanàna hafa mihitsy aza! Ny asa sy ny fiainana dia efa tena be atao, ao anatin'ny fandaharam-potoana tery, manantena ihany koa ianao ny hanokana fotoana kely hilalaovana piano, hanomezana fahafaham-po ny tombotsoanao manokana. Na niasa mihoatra ny alina aza mandra-pahatongan'ny tranon'ny alina amin'ny alina, miaraka amin'ny tsy fahitan-tory; mazava ho azy fa te-hilalao mihoatra ny minitra vitsy ianao. Ny piano nomerika dia azo ampidirina mivantana ao anaty headphones, fa tsy manelingelina ny vahoaka dia tombony tsy azo tohaina tokoa. Ary izany rehetra izany dia zavatra tsy hain'ny piano nentim-paharazana omena anao.
Ankoatr'izay, ny piano nomerika dia mampiala voly kokoa. Aleo ihany ny karazana tonony, reverb, manoratra mivantana ireo rehetra ireo. ny piano nomerika dia azo raisina ho fitaovana fampidirana kitendry. Ampidiro ao anaty solosaina ny USB ary ampiasao rindrambaiko toa an'i Ivory American D, ary Piano; Saika tianao ny manova piano vaovao iray hafa. Fantatsika fa tamin'ny vanim-potoana Bach, mbola tsy nisy piano maoderina, ary samy nampiasa harpa. Noho izany, azonao atao ny manandrana milalao ny toetra mitovy amin'ny hatsaran'ny feon-kira, ary na dia toy ny piano moderina aza ny klavier, dia akaiky kokoa an'i Bach izy io noho ny piano mahazatra. Ity karazana fahafinaretana ity dia zavatra tsy hain'ny piano nentin-drazana atao mihitsy. Azo atao mifantina bebe kokoa ny piano nomerika. Vidiny somary ambany kokoa, tsy mila fanarahana, tsy fikojakojana.
Saingy, misy foana fa. Ny piano niomerika dia mbola tsy afaka manome anao karazana fampifangaroana indostrialy sy zavakanto, ny fahatsapana mozika madio sy madio toa ny piano nentim-paharazana. Toy ny ao amin'ny bokin'i John berg, The Way to Watch, na dia manana an'ity sary avo lenta ity amin'ny Internet aza isika dia mbola mividy tapakilan'ny sidina mankany Paris hijerena an'i Mona Lisa tany am-boalohany. Satria fantatsika fa marina izany, izay hitantsika eo amin'ny efijery, na dia afaka manaloka aza isika, mahita ny antsipiriany rehetra, dia mbola mieritreritra ihany isika fa tsy marina izany. Ara-dalàna ny olona, ​​nefa koa tsy mitombina kokoa, tiako ny piano nomerika, satria mahafinaritra ahy kokoa izany, mora hatonina noho ny piano nentim-paharazana. Fa malahelo ny piano nentim-paharazana aho miaraka amin'izay, satria fantatro fa izany no hatsaran-tarehy mekanika sy ilay feo maneno --— na dia mety mila haverina haverina indray aza izany.
Piano mandeha amin'ny herinaratra, Electric Grand Piano, Piano Digital Upright, Piano nomerika lafo vidy, Kitendry Piano Smart, Fanamboarana Piano Digital,